Ny Keynote an'i Apple dia nandiso fanantenana, ary tsara izany | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | 17/09/2021 13:00 | About us
Tamin'ny faha-14, araka ny fantatrao tsara satria tena nanaraka azy mivantana niaraka taminay ianao, dia nitranga ny Apple Keynote vaovao izay namoahana vokatra vaovao ho vaovao. iPad range, somary nohavaozina Apple Watch ary mazava ho azy ny ambaratonga feno an'ny iPhone 13, na izany aza, noho ny antony maro dia nandiso fanantenana ity Keynote ity.
Ny tsy fahafaham-po ateraky ny Keynote tamin'ny 14 septambra dia malaza, saingy afaka mamaky tsara ny zava-nitranga isika. Ny hetsika fampisehoana iPhone 13 dia tena nandiso fanantenana ny mpampiasa maro, koa ... Fa maninona no mety ho tsara io?
1 Tsy mitondra rano foana ilay renirano
2 Tim Cook dia tsy maintsy nihazona ny fihomehezana Keynote
3 Anjarantsika izany fa tsara izany
Tsy mitondra rano foana ilay renirano
Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nanao na inona na inona izy. Nandany ny fahavaratra izahay tamin'ny finoana ny delestazy nataon'i Jon Prosser sy Mark Gurman, toy ny hoe mpitory Apple izy ireo. Na dia marina aza fa tsy maintsy omentsika ny tombotsoan'ny fisalasalana izy ireo satria misy tranga maro nahombiazan'izy ireo, raha nanana taratasy Excel (Isa ho an'ny mpino an'i Apple) miaraka amin'ny kajy statistikan'ireo vinavinan'izy ireo izahay, efa nanome ny tena zava-misy tarehin-javatra taloha.
Ny egôn'izy ireo dia nahatonga azy ireo hiditra anaty dobo mihoatra ny tamin'ny taona lasa ary Apple dia afaka nandray anjara tamin'izany nanesoeso azy ireo tamin'ny Keynote izay tsy misy ifandraisany firy na amin'ny zavatra antenaina.
Ahoana ny amin'ny famerenantsika ireo tsaho rehetra apetrak'ireo mpandalina papier-mâché amintsika amin'ity fahavaratra ity?
Ny iPhone 13 Pro dia mety hanana rafitra Always On Display mitovy amin'ny Apple Watch: Ity tsaho ity dia saika tsy hitondrana azy, raha ny tokony ho izy satria ho nahita fiasa bitika nandritra ireo betsa isan-karazany ao amin'ny iOS 15 izahay, zavatra izay tsy nisy mihitsy.
Ny Apple Watch dia hanisy endrika endrika feno habibiana tsy mbola fahita toy izao: Eritrereto izany, tsy misy na dia smartwatch fisaka sy zoro iray manontolo aza eny an-tsena, lavitra ny lojika rehetra izy io satria ny fanoherana sy ny ergonomika azy no hatao marimaritra iraisana.
Ny AirPods taranaka fahatelo, anelanelan'ny AirPods Pro sy ny AirPods: Angamba iray amin'ireo vokatra lozika indrindra amin'ny famelabelarana, na izany aza, ny tena zava-misy dia ny AirPods Pro sy ny AirPods tany am-boalohany dia natolotra tamin'ny Keynote hafa tsy mitovy amin'ny an'ny iPhone, miaraka amin'ny famerenana indray, efa manana Keynote roa farafaharatsiny miandry antsika izy ireo.
Tim Cook dia tsy maintsy nihazona ny fihomehezana Keynote
19:00 tonga ny fotoana Espaniôla (10:00 tao Cupertino) ary Tim Cook dia nanomboka ny Keynote toy ny hoe maika, saika tsy niarahaba aho raha nisotro rano nanondraka ny tendany nandritra ny adiny roa teo amin'ny YouTube, nahita iPad iray izahay. Eny, ny iPad marina indrindra izay nampanantenain'ny mpandinika maro fa tsy ho hitantsika mandritra ity Keynote ity. Ary raha ny iPad Pro no ilazanao hoe: "andao, andao handeha", fa tsy misy lavitra ny marina, Apple dia niloka tamin'ny iPad 10.2-inch, ny vokatra fototra indrindra ao amin'ny faritra iPadOS izay mahazo 122º sy 12MP vaovao Fakan-tsary FaceTime miaraka amin'ny fanatsarana ny rindrambaiko.
Avy eo saika tsy naniry ny "voafitaka isika", Apple dia mametraka iPad Mini ao amin'ny ekipa, izany hoe, raha fintinina, iPad Air 8,5-kely dia kely, miaraka amin'ny fifandraisana 5G feno sy Touch ID mivantana eo amin'ny bokotra herinaratra. Eny, miresaka marina momba an'io iPad Mini io izahay izay andro iray talohan'ireto mpandalina ireto dia nanome toky fa tsy hivoaka izy io mandra-pahatapitry ny taona ary eo am-pelatanan'ny orinasa Cupertino. Zara raha nanana dimy ambin'ny folo minitra Keynote izahay ary efa nipoaka ny lohanay, natahotra ny ratsy indrindra izahay, ary izany tokoa.
Ny manaraka dia Apple Watch, ary matetika Apple Watch. Ny Apple Watch fotsiny io mpivarotra setroka Nanome toky anay nandritra ny volana maro izy ireo fa tsy hiala izy. Tsy misy sensor sensor, tsy misy famolavolana vaovao radical izay mampitovy azy amin'ny faritry ny vokatra iPhone, ny teknolojia fandrefesana tsy dia mandroso kokoa. Ny Apple Watch Series 7 vaovao dia raha ny tena izy dia fivoarana kely amin'ny Apple Watch Series 6 amin'ny lafiny tontonana, mampihena ny sisiny ary mitanondrika ny efijery, zavatra izay efa nampiharin'i Apple tamin'ny fitaovana hafa ary mahay manao tsara.
Manohy ny bingo amin'ny iPhone 13 izahay ary ny faritra misy azy ireo, eto, farafaharatsiny mba nahazo zavatra nety izy ireo, saingy hey, raha jerena fa ny fanatsarana kely dia hita taratra amin'ny fefy 20% mahia kokoa, ny maodelin'ny fakan-tsary miaraka amina fakana hazavana tsara kokoa ary efijery misy famelomana 120 Hz ambony kokoa ho an'ny tontonana an'ny ireo maodely «Pro», tsy hoe hanome medaly azy ireo isika. Mazava ho azy fa tsy afa-nanoatra tamin'ny Always On Display, fampanantenana iray hafa izay latsaka tao anaty rano borage nandritra ny Keynote. Matotra tokoa i Tim Cook angamba tsy maintsy nitifitra fakana an-jatony satria nihomehy izy.
Aza very finoana, tonga izao ny Zavatra iray hafa, hoy i Steve Jobs tamiko. Ny kaonty dia niparitaka teo amin'ny efijery toa ny lambam-baravaran'ny Star Wars raha teo am-piandrasana izany fanambarana mahafinaritra izany izahay AirPods taranaka fahatelo.
Anjarantsika izany fa tsara izany
Eny, ary tsy manao aho colorao milaza. Ny lesoka dia ahy, satria nanome fahatokisan-tena ho an'ireo mpandalina amerikana avaratra ireo izay mitsidika anay marobe izahay, izay mampientanentana ahy tsirairay avy aminareo, satria ilay misoratra anarana amin'ireto andalana ireto dia tsy inona fa ny mpanaraka an'i Apple, amin'ny lafiny lehibe kokoa na kely kokoa, fa iza no mihinana amin'ny latabatra mitovy aminao. Namitaka ahy ihany koa izy ireo, niaraka tamin'ny fahasosorana fa izaho dia tao anatin'ny orinasany, tsy an-tsitrapo nefa nifanarahana, tsy nisy fikasana nefa meloka.
Ary tonga ny 15 septambra, keynote hangover ary ny hevitra avy amin'ny vondrona Telegram (manatevin-daharana anay, efa mihoatra ny mpampiasa 1.100 izahay) nanondro an'i Keynote ho iray amin'ireo mahakivy indrindra.
Ary izao dia handresy lahatra anao aho hoe maninona no tsara daholo izany. Vaovao lehibe fa ny Apple dia mifanohitra amin'ny mpandalina na tiantsika na tsia, midika izany fa niverina tamin'ny lalan'ny tsiambaratelo sy asa vita tsara i Apple, na inona na inona lazain'ny olona. mpivarotra setroka ary manamarika ny lalan'izy ireo manokana. Ity dia efa, ary ho fampianarana an'i Apple foana, ary Misaotra ny Keynote amin'ity taona ity, ny Keynote manaraka dia ho manokana kokoa, hitovy amin'ny teo aloha io, satria tsy fantatsika izay mety hitranga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny Keynote an'i Apple dia nandiso fanantenana, ary zavatra tsara izany
Mahafinaritra ilay lahatsoratra.
Tokony ampiako hoe tsy hadisoan'ny olona milaza an'io. Raha tsy ny pejin-tranonkala rehetra nanangona tsaho toy izany dia TSY vaovao.
Manome tsiny azy amin'ny fanaparitahana azy.
Mila milaza ihany koa aho fa ity Keynote ity dia heveriko fa iray amin'ireo fahadisoam-panantenana lehibe indrindra tato anatin'ny taona, raha tsy ny ratsy indrindra tamin'ny rehetra.
Heveriko fa io no Apple Keynote tokana izay NO fitaovana nampiana zava-baovao.
Izy io dia fehezan-teny milaza fa ao amin'ireo fitaovana rehetra dia ny fanatsarana efa hitany ihany no nataon'izy ireo. TSY MISY Vaovao.
Heveriko fa tsy kisendrasendra izany. Mino marina aho fa ity Keynote ity dia vokatry ny areti-mifindra izay nisy fiatraikany tamin'ny fivelaran'ny Apple. Ny mahazatra.
Ny zavatra rehetra dia nitovy. Tsy misy zava-baovao. Tsy misy fitaovana.
Mamaly an'i xavi
Hitako toy izany, misy taona maro izay nandiso fanantenana ny fampisehoana sy ny fanatsarana, alao ao an-tsaina fa tsy isan-taona dia hisy ny revolisiona amin'ny teknolojia. Mampalahelo, na soa ihany fa ho lasa tototry ny farany isika, izany dia mitranga isaky ny taona vitsivitsy.
Andao hojerentsika raha ny taona ho avy no tsara.
Mamaly an'i Dag
Ny mini iPad vaovao dia efa azo alefa mialoha amin'ny Amazon